मिडियामा मदिराको विज्ञापन : कानुन थाहा नपाएको कि नटेरेको ? – MySansar
Posted on August 14, 2020 August 14, 2020 by Salokya
यो दुई वटा पेज नेपालमा अहिले चलेको दुई वटा पत्रिका कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकाको अन्तिम पेज हो। दुवैमा एउटा ठूलो विज्ञापन छापिएको छ। उत्पादनको नाम नचिनिने गरी धमिलो चाहिँ मैले बनाइदिएको हो। केही अनलाइनहरुमा पनि यो विज्ञापन ती अनलाइनको होमपेज खोल्ने बित्तिकै देखिने गरी राखिएका छन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ? यस्तो विज्ञापन गैरकानुनी हो।
२०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार रहेको छ। यसको उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ। त्यस्तै उपदफा (२) मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ।
बियरमा पनि अल्कोहल पदार्थ हुने भएकोले यो पनि मदिरामा पर्छ। यस्तो सामानको विज्ञापन बनाउन, वितरण गर्न र प्रचार प्रसार गर्न यो ऐनले बन्देज लगाएको छ।
अर्थात् विज्ञापन छाप्ने कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका र अनलाइन मिडियाहरुलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र त्यसमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ। तर कसैले शक्तिशाली मिडियाविरुद्ध यस्तो मुद्दा लगाउने आँट गर्न सक्लान् त?
2 thoughts on “मिडियामा मदिराको विज्ञापन : कानुन थाहा नपाएको कि नटेरेको ?”
विज्ञापनको आमदानी र मार्केटिंग विभागको दबदबा सक्किगो नि !
Onlinekhabar.com मा पनि रहेछ।